सरकारी कार्यालयमा सिसिटिभी क्यामेरा राख्नुपर्‍यो - जनताको आवाज - साप्ताहिक
सरकारी कार्यालयमा सिसिटिभी क्यामेरा राख्नुपर्‍यो
मंसिर ९, २०७२
सरकारी कार्यालयहरूमा सानोतिनो कामका लागि पनि घुस दिने–लिने चलन छ त्यसैले अब प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा सिसिटिभी क्यामेरा राख्नुपर्‍यो ।
नेपालको संविधानमा भएको समावेशी शब्द हटाउनुपर्छ । त्यसको सट्टा गरिबलाई अधिकार राखे सम्पूर्ण नेपालीको हित हुने थियो ।
सरकारले चीनसँग व्यापार बढाउने वातावरण मिलाउनुपर्छ, उत्तरी नाका खोल्नुपर्छ । आत्मनिर्भर हुने वैकल्पिक ऊर्जा पहिचान गरी त्यसको प्रयोगतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ ।
नेपालको नयाँ संविधानले ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ तर कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ, जस्तै रोजगारीको हक कसरी कार्यान्वयन गर्छ राज्यले ?
नेपालमा यति धेरै विद्यार्थीले स्नातक तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका छन् तर रोजगारीको अवसर भने सून्यजस्तै छ । के सबैले खाडी मुलुकमा भर पर्नुपर्ने हो ? यदि त्यस्तै हो भने सरकारले उच्च शिक्षा बन्द गर्नुपर्छ । बरु सबैलाई अरेबिक, मलेसियन जापानी फ्रेन्च, स्पेनिस, कोरियन आदि भाषा सिकाए बढी काम लाग्छ ।
नेपालको अवस्था देखेर आँखा रसाउँछन् । मजदुरीका लागी नेपालीहरूले विदेश भासिनुपरेको छ, तर शासकहरूलाई यो कुराले कत्ति छोएको छैन । सारा जनता परिवर्तनका लागि एकजुट हुँदा पनि नेताहरू एकजुट हुन सकेनन् । यस्तो अवस्थामा दल, आस्था, विचार, धर्म आदिका नाममा बिभाजित हुनुभन्दा सबै एक ठाउँमा आएर देश विकास लागि पाइला चाल्नुपर्छ ।
नेपाली नेताहरूको चरित्र अरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने होइन कि आफैं कोही उत्तर त कोही दक्षिणतर्फ आकर्षित हुने खालको छ ।
नयाँ सविधानले विभिन्न जाति समुदायका लागि आयोगको कल्पना गरेको छ तर देशलाई दूरगामी असर पार्ने नागरिकता छानबिन आयोग खोइ ?
प्रकाशित :मंसिर ९, २०७२
१८ किलोमिटर टाढाको अक्षर चिन्ने क्यामेरा
सबैभन्दा विशाल र शक्तिशाली क्यामेरा
हुवावे एसेन्ड जी सेभेन
सरकारी निरीक्षक मञ्चन हुँदै
कडा संविधान किन बन्दैन
जनताको आवाजबाट अरु
एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर आजियटा र एनसेलबाटै असुल्नुपर्ने आदेश तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? फाल्गुन ४, २०७५
भूकम्पपीडितहरू सबैको नाममा खाता खोलिएको कुरा सुन्दा खुसी लाग्यो असार २७, २०७३
काठमाडौंको हावा निकै प्रदूषित छ असार ९, २०७३
कतिपय सरकारी कर्मचारी घूसबिना कामै गर्दैनन् जेष्ठ ३२, २०७३
भूकम्पप्रभावितहरूलाई बिर्सिएजस्तो छ वैशाख २७, २०७३
देशभरि नै सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुनुपर्‍यो चैत्र ४, २०७२
ग्याँस र इन्धनको सहज उपलब्धता होस् चैत्र १, २०७२
नाकाबन्दी समाप्त भए पनि अभाव फाल्गुन १८, २०७२
कालाबजारी आफ्नै मुल्यमा ग्याँस बेचिरहेका छन् माघ १७, २०७२
राहतमा अनियमितता हुन थाल्यो माघ ९, २०७२